जीवनको सेरोफेरो: अनि तात्दैन त पारो ?
अस्ती भर्खर आफन्तको बिहेमा पोखरा देखी हेटौडा पुगेर आए । यो नसोच्नु होला टाढाको बिहेको यात्राले पारो तातेको होला तर हैन यात्राको दौरान देखेका र भोगेका क्षणहरूले पारो तताएको हो । संग सँगै पोखरा बसाइका यि दिन हरूमा पढेका, हेरेका र सुनेका समाचार हरूले पारो तताएको ततायै छ । अखीर के के कुराले पारो तात्यो त यि पारो तताउने कुरा पढ्दा सायद तपाइहरूको पनि यो चिसो मौसममा पारो तात्ला ।
घर बाट २ किमी पर गगनगौडा पुग्दा नपुग्दै फाइटर जेट देखेँ आजकल हरेक दिन जस्तो नेपाली आकासमा फाइटर जेट उडेको उड्यै गर्छन यसमा किन पारो तात्ला ? कुरा के भने सार्वभौम नेपालको आकासमा उड्ने त्यो फाइटर प्लेन नेपालको नभइ भारतको हो । भलै उडानमा गल्तीले नेपालको सिमा मा छिर्यो होला तर कती किलोमिटर पर सम्म लाइ गल्ती मान्ने ? पोखराको आकासबाट पनि उत्तर तिर लाग्ने गरी गल्ती त पक्कै भएन । अचानक झुक्कीएर भए पो गल्ती यो त अपराध हो । एक पटक भए त ठिकै हो तर हरेक दिन जसो यस्तो हुनु । त्यसमाथी सरकारी निकाय मौन बस्नु अनी तात्दैन् त पारो
पृथ्विराजमार्ग मात्र के पुगेको थिए बदाम र सुन्तलाको बोक्रा भरीएको प्लास्टीक सागर थापाले हानेको फ्री किक जसरी मेरो टाउकैमा आइपुग्यो । धन्न फुल हेलमेट लगाउने बानी छ र नत्र गुदी उनीहरूको मुखमा बोक्रा मेरो मुखभरी हुने रहेछ । बस यात्रा त हामी सबै गर्छौँ तर मैले कहीले पनि त्यसरी फोहर फालेको छैन । पर केही अगाडी बाटो भरी बमन गरीएको कालो थैली कसले के खायो समेत भन्ने गरी लम्पसार परेर बाटो भरी बसेको थियो धन्न सुन्तलाको झोला ले लागेको रैछ यो थैली भएको भए ? कमन सेन्स आउन लागेको लागेको जस्तो चाँही हो है नत्र पहीले झ्यालबाट सिधै पछाडी बस्ने मान्छे, बस, पैदल यात्रु देखी सडक सम्म छरपस्ट हुन्थ्यो । तर यती सम्म सेन्स त पलाएछ की वसबाट नै सबै थोक गर्नु हुँदैन कम्तीमा प्लास्टीकको प्रयोग सम्म गर्ने भएछन तर बाटोमा नै फालेपछी त्यो थैलोको के काम ? वस रोकीएपछी सुरक्षीत स्थानमा बिसर्जन नगरे पछी । अझ ड्राइभर र यात्रु समेत पछाडी आएको सवारी नहेरी थुक्न थालेपछी अनी तात्दैन त पारो ?
खुला दिसा मुक्त कास्कीमा बस रोकेर पालै पालो दिसा पिसाब गरेको त्यही माथी सबैले देख्ने गरेर, बिजयपुर आसपास, गण्डकी हस्पिटलको उत्तरी गेटको चौतारा, गगनगौडा को तल्लो भाग आसपासमा देखीने दृष्यले परीवार सँग हिडडुल गर्नै समस्या पार्ने गरेको छ, खुला दिसा मुक्त घोषणा गर्दा पिसावलाइ चाँही ध्यान दिएनन की क्या हो । की कास्कीलाइ फेरी पिसावमुक्त बनाउने बजेट आउदैछ ? राजमार्गमा समेत प्रयाप्त सार्वजनिक शौचालय नवनाइकन खुला दिशामुक्त घोषणा गरेपछी तात्दैन त पारो
चितवन पुगेको के थिए मुग्लीन नारायणगढ सडक खण्ड पिच कम खाल्डा धेरै, बर्षायाम भएको भए पोखरी हुन्थ्यो । बेगनास तालका माछाका भुरा हालीदिने थिए । नभए धान रोप्नु हुन्थ्यो तर सुख्खा मौसम भएर धुलो उडेर १ मिटर पर बाटो देख्न गाह्रो । अझ डोजर लगाएर खनेर त्यसै छोडीएको मरूभुमीमा के धुलो उड्छ र बरू । भरतपुर कट्ने वेलामा एउटा भुसतिघ्रे आएर पैसा माग्यो के को पैसा भन्दा त सडक कर रे ! बाटोको हालत बाइक चढ्दा घोडा चढे जस्तो छ ! बाटो मर्मत भनेर ठेकेदारको भुँडी मर्मत हुँदो हो । बार्षिक कर त पोखरामै तिरेको फेरी बाटो पिच्छे छेकी छेकी कर ? करकर गर्नु भन्दा ५ रूपिया दिँए । उता विहेघर पुग्दा श्रीमतीले वाइक चिनी मलाइ चिनिन् ! अचम्म ! बाइकमा धन्न नम्बर देखीएको रैछ, म त धुलोले चिन्नै नसकीने भएछु ऐना हेर्दा आँफु त राउटे जस्तो । हेलमेटको शिशा लगाउन पाए पो अनुहार बच्ने थियो । धुलो ले बाटो नदेखीने, बाटो हेर्न शिशा खोल्नु पर्ने सडकको यो पारा देखेपछी तात्दैन त पारो ?
फेसबुकै चर्चा छ विश्वभरी अझ नेपालमा त इन्टरनेट भनेकै फेसबुक भएको छ । पहीला फेसबुकबाट चर्चा र वाहवाही पाएर आँफ्नै वेभसाइट समेत बनाएका र इमेल ठेगाना जनतालाइ गुनासो पठाउनका लागी खुला गरेका, नेपालका विव्दान भनिने प्र.म., अहीले फेसबुकबाट नै नकारात्मक टिप्पणी आउन थालेपछी "सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट सामाजिक शिष्टाचार, नैतिकता र सार्वजनिक हितको प्रतिकूल हुने, सामाजिक सदभावलाई खलल पुर्‍याउने र समाजमा द्वेष र आतङ्क फैलाउने गरेको" भन्न थालेका छन् आँफु अनुकुल भए ठिक नभए बेठीक अनी तात्दैन पारो ?
बिहान उठ्यो मुख धुनलाइ धारामा पानी छैन, खाना पकाउन ग्याँस छैन, अफिस जानलाइ कपडामा आइरन गरौ लाइन छैन, सार्वजनिक सवारीमा अफिस जाँउ १५ मिनेटको बाटो ५५ मिनेट लाग्छ त्यसमाथी बर्षभरीको भाडा जोगाउने हो भने एक दुइ आना त घडेरी जोडीन्छ, आफ्नै सवारीमा जाँउ पेट्रोल छैन, पत्रिका पढ्न खोज्यो सजीलै किन्ने हैसीयत छैन, छ त केवल हाफ सेञ्चुरी बनाउन बाँकी मन्त्री परीषद त्यसलाइ हाँक्न खोजेका बैधको ओखतीले बिमारी भएका डाक्टर ! अनी तात्दैन त पारो ?
अब त तपाइको पनी पारो तात्यो होला
Posted by Bishal Gautam at 2/13/2012
Labels: Current Issue, Jokes